Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo kormeeray dhismaha ka socda madaxtooyada Puntland+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo kormeeray dhismaha ka socda madaxtooyada Puntland+(SAWIRRO).
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo kormeeray dhismaha ka socda madaxtooyada Puntland+(SAWIRRO).
Ku-simaha Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland, Ahna Madaxweyne ku-xigeenka Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa maanta kormeeray dhismeyaasha cusub ee lagu kordhinayo Madaxtooyada kuwaasi oo meel wanaagsan maraya iyo sida ay u socoto horumarinta bilicda xarunta Madaxtooyada.
Madaxweyne Axmed Karaash ayaa xarumaha uu kormeeray waxaa ka mid ah dhismaha hoolka shirarka, qaabka casriga ah ee loo dhisayo qeybta soo dhaweynta martida, dhismeyaasha xarumo kulan oo cusub iyo beerta nasashada ee xarunta Madaxtooyada taasi oo kor uqaadeysa bilicda Qasriga Madaxtooyada.
Previous articleBarnaamijka bilic soo-celinta waddooyinka Muqdisho oo wajigii labaad galay
Next article(DAAWO) Wasiirka Warfaafinta oo ka warbixiyey booqashadii maanta uu safiirka Turkigu ku yimid wasaaradda+(MUUQAAL).